कोरोनाबाट थप ४ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ७९ पुग्यो, कहाँ कति ? — Sanchar Kendra
कोरोनाबाट थप ४ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ७९ पुग्यो, कहाँ कति ?
काठमाडौं । नेपालमा सोमबार थप ४ जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या ७९ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार थप ४ जनाको कोरोनाले मृत्यु भएको पुष्टि गरेका हुन् ।